Double Shot Injection မှို Double Shot Injection မှို မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ကျနော်တို့အပြင်သတ်မှတ်ထားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးအသိမှတ်ဖောက်သည်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုကိုင်ထား Double Shot Injection မှို။ ကျနော်တို့ကစျေးကွက်ဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်ကိုနှုန်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဒီဇိုင်းများတွင်ဤပူဇော်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကကမ်းလှမ်းထုတ်ကုန်တင်းကြပ်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဒီဇိုင်းများများအတွက်သေချာစေရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသီးအအဆင့်မှာစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
လူအချို့က 2K injection molding or two shot shot molding ဟုခေါ်သော Double Shot injection မှို,နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောကွဲပြားခြားနားသောပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်.
နှစ်ကြိမ် Injection မှိုပူးတွဲပိုကောင်းအောင်-အစွမ်းထက်မော်လီကျူးနှောင်ကြိုးကိုဖန်တီးရန်ခဲယဉ်းခြင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများ polymerization.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.injectionmolding.com.tw/my/double-shot-injection-molding.html
အကောင်းဆုံး Double Shot Injection မှို ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Double Shot Injection မှို မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ